Booliska Mombasa oo xiray 2 nin oo daroogada ka dhanacsata | Risala FM-The Voice of Horn Africa
Booliska Mombasa oo xiray 2 nin oo daroogada ka dhanacsata
Ciidamada amaanka ee ka howlgala ee Gobolka xeebta ayaa habeenimadii xalay gacanta ku dhigay 2 qof oo lagu tuhunsanyahay in ay daroogada noocyadeeda kala duwan ka ganacsadaan, kuwaasoo ay booliska si weyn u ugaarsanayeen.
Ragaan oo lagu xiray xaafada Msambweni ee magaalada Mombasa, ayaa xiligaas kusii wajahnaa wadanka dariska ah ee Tanzania, sida ay saraakiisha sheegeen.
2-da qof oo kala ah Suleiman Abdhallah oo loo yaqaano Karama iyo Mgeni Kidonga ayaa lagu soo qabtay howlgal abaabulan, iyagoo sidoo kale waqtigaas laga helay budo cad oo la rumeysanyahay in ay tahay daroogada Cocaine iyo lacag Cash ah oo lagu qiyaasay 400,000 oo shilin.
Taliyaha ciidamada dambi barista CID-da ee Countiga Kwale Edwin Kamau ayaa sheegay in ay eedeysanayaashaan ku raad joogeen kadib markii ay heleen macluumaad sheegaya in ay qorsheynayaan sidii ay xadka uga gudbi lahaayeen.
Kamu ayaa warbaahinta u sheegay in ragaan ay war bixintooda diyaariyeen isla markaana ay dhawaan maxkamadda kasoo hor muuqan doonaan, si ay sharciga u wajahaan.
Sarkaalkan ayaa intaas ku daray in ciidamada amaanka ay wali sii amba qaadayaan ugaarsiga dad kale oo ka ganacsiga maandooriyeyaasha ku howlan.
Magaalada Mombasa iyo deegaannada kale ee Gobolka xeebta ayaa lagu tilmaamaa in ay ka mid yihiin meelaha ugu badan ee lagu isticmaalo muqaadaraadka iyo daroogada noocyadeeda kala duwan.